Izindaba - Ukwethulwa kwe-gabion net
Inetha leGabion lingasetshenziselwa ukwesekelwa kwemithambeka, ukusekelwa komgodi wesisekelo, ukufafazwa kokhonkolo we-gabion net ophahleni lwamadwala, uhlaza (uhlaza), ujantshi nothango lokuhlukaniswa komgwaqo omkhulu, futhi kungenziwa futhi amakheji namata ometha wokuvikela imifula, amadamu nezindawo zasolwandle, kanye namakheji asetshenziselwa ukuvala amadamu nemifula. Inhlekelele enkulu kakhulu yemifula ukubhujiswa kwamabhange emifula ngamanzi, okudala izikhukhula, okudala ukulahleka okukhulu kwempilo nempahla kanye nokuguguleka kwenhlabathi. Ngakho-ke, lapho kuxazululwa lezi zinkinga ezingenhla, ukusetshenziswa kwamanetha e-gabion sekuyisinye sezixazululo ezinhle kakhulu, ezingavikela unomphela umbhede webhange kanye nebhange.
1. Isakhiwo esiguquguqukayo singakwazi ukuzivumelanisa nezinguquko emthambekeni ngaphandle kokulimala, futhi sinokuphepha nokuzinza okungcono kunesakhiwo esiqinile;
2. Amandla anamandla okulwa nokuhayiza, angamelana nesilinganiso sokugeleza kwamanzi okuphezulu okungu-6m / s;
3. Isakhiwo ngokwemvelo sinamanzi futhi sinokubekezelela okunamandla kwimiphumela yemvelo nokuhlunga kwamanzi angaphansi komhlaba. Okuqinile okumisiwe nodaka emanzini kungafakwa enqwabeni yamadwala, evumelana nokukhula kwezitshalo zemvelo futhi kancane kancane ibuyise imvelo yasekuqaleni yemvelo.
Inetha le-gabion lenziwa ngendlela yocingo lwensimbi noma i-polymer wire mesh, engalungisa itshe endaweni efanele. Ikheji lezintambo yisakhiwo esenziwe ngocingo oluboshwe noma olushiselwe. Lezi zakhiwo ezimbili zingafakwa i-electroplated, futhi ibhokisi lezintambo eliboshwe lingafakwa ngokungeziwe nge-PVC. Kusetshenziswa idwala eliqinile elimelana nesimo sezulu njengokugcwalisa, ngeke liphule ngokushesha ngenxa yokuguga kukasinki ebhokisini lamatshe noma e-gabion. Ama-gabion anezinhlobo ezahlukene zamatshe okuvimba anezici ezihlukile. Amatshe ayi-polygonal angaxhumeka kahle, futhi ikheji lamatshe eligcwele ngawo alikhubazi kalula.
Kwezobunjiniyela be-landscape, ukuvikelwa kwemithambeka emikhulu, ukuvikeleka emiseleni yedamu nokubuyiselwa emthambekeni wentaba obekulokhu kuyikhanda konjiniyela nongoti. Sekuyiminyaka eminingi behlola indlela yokonga futhi elula engakwazi ukuhlangabezana nezidingo zokuvikelwa kwentaba nolwandle kuphela, kepha futhi nokufeza umphumela wokuhlaza imvelo. Kancane kancane, lobu buchwepheshe baqala ukuvela, ubuchwepheshe besicelo samanetha e-gabion emvelo.
Imikhiqizo ye-gabion net ihlukile, ikakhulukazi isetshenziselwa ukuvikela imithambeka nokugcina izindonga, ukuvikelwa kwebhuloho, ukuvikelwa komfula, ukuvikelwa komgwaqo omkhulu, ukuvikelwa kwemithambeka eseceleni, ukuthuthuka kwethambeka lomfula emvelweni kanye namanye amaphrojekthi.